BHome Syariah Lodging with Industrial Trends.
Wamkelekile kwi-B-Home Jember (Sharia)
Indawo yokulala ekuphela kwayo enembono yamva nje yosomashishini kunye nokuziva ukhululekile ekhaya, okwenza ukuhlala nosapho kukhululeke kwaye kukhethekileyo.
Ifakwe kwindawo eyongezelelweyo yeJember apho ubomi bemihla ngemihla buqhubeka kwisakhiwo esiqhelekileyo sedolophu. It is 4.4 km ukusuka Transmart mall, 5.6 km ukusuka Roxy mall, 4.5 km ukusuka Alun-alun Kota Jember yaye malunga ne-18 km ukuya Rembangan apho ungafumana ubuhle bendalo, 35 km ukusuka Papuma Beach nawe uyakwazi ukufumana beach lenkundla kunye omkhulu unique ilitye njengenyoka eya kuba yinto ekhethekileyo yokuchitha iholide yakho kunye neentsapho.
- Igumbi loku-1 - Ibhedi enkulu ye-Queen eyodwa (160x200 cm), i-AC, itafile yokunxiba, iitafile ezisecaleni kunye nomnyango wokufikelela owongezelelweyo kwiyadi yangasemva.
- Igumbi lesi-2 - Ibhedi enkulu ye-Queen enye (180x200 cm), i-AC, itafile yokunxiba, kunye netafile esecaleni.
- Ikhitshi - ifriji, isitovu, isithambiso samanzi, ibha kunye netafile yokutyela.
-Igumbi lokuhlala-Isofa, isitulo, itafile kunye nomabonakude.
- Indawo yokusebenzela - itafile yokusebenza, ishelufu yeencwadi, kunye nesitulo.
Ikhapoti - yeemoto ezi-2, ukuba zingaphezulu kwe-2, ungamisa ecaleni kwesakhiwo, kodwa kukhuselekile.
- Emva kwendlu - isitulo esijingayo kunye neetafile zangaphandle onokuzisebenzisa ekuseni kwisidlo sakusasa phantsi kwelanga, okanye isidlo sakusihlwa phantsi kwesibhakabhaka.
- Iitawuli, isepha, isomisi seenwele, ii-hangers kunye neslippers azibonelelwanga
Indlu yonke ilungiselelwe abantu aba-4, kwaye igumbi lokulala lenzelwe abantu aba-2. Ngaphezulu kwe-2 ayikhululekanga kangako, asiboneleli ngebhedi eyongezelelweyo.
Ukufikelela kwiindwendwe - Ungafikelela kuzo zonke iindawo.
IBhome yindawo yokuhlala yasekhaya yaseSyariah, ngoko undwendwe kufuneka luqonde kunye neemfuno ngaphambi kokubhukisha. Kuphela ngabantu abathandanayo abanokuhlaliswa (abaza kucela i-id card efanayo kwizibini ngaphambi naxa befika) kwesi sithuba amadoda/abafazi kuphela. Njengoko singamaSilamsi, asikukhuthazi ukukrexeza nezinye izinto ezibonisa ukungabi nambeko ngaphandle komtshato. Kananjalo asizivumeli iindwendwe ukuba zimeme abanye abantu ukuba balale kwindawo yethu --ngaphandle kokubhukisha.
I-Airbnb asiyohotele, ngoko imithetho yahluke ngandlel’ ithile kuneehotele.
Iiyure ezithe ngqo kwi-B Home ingo-21.00 – 06.00 (ngosuku olulandelayo) Umabonwakude, amazwi, okanye ezinye izixhobo kufuneka zigcinwe zikumgangatho ophantsi onentlonipho ngawo onke amaxesha. Iingcango kufuneka zivulwe kwaye zivalwe ngokuzolileyo.
Ixesha lokungena: 15:00 - 21:00 WIB (3-9 PM)
Ixesha lokuphuma ubuninzi 11.00 WIB ngosuku olulandelayo Ukuba uceba ukungena emva kwe-9 PM, asinakuvuma isicelo sakho.
Ukufota okanye ukudubula kwevidiyo kusetyenziswa umfoti/isixhobo sobuchwephesha bokufota ngaphambi komtshato, imveliso yorhwebo okanye njalo njalo/usapho luya kuhlawuliswa ngaphezulu. Ixabiso kunye nomgaqo wephakheji ye-photoshoot unokubonwa kwi-instagram yethu.
Enkosi ngentsebenziswano yakho entle.